Gabar TikTok caan ka aheyd oo 10 sano oo Xabsi ah lagu xukumay! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Gabar TikTok caan ka aheyd oo 10 sano oo Xabsi ah lagu...
Qaahira (Halqaran.com) – Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa 10 sano oo xabsi ah ku xukuntay gabadh lagu magacaabo Xaniin Xosaam oo caan ka ah barta TikTok. Gabadhaas waxaa sidoo kale lagu ganaaxay $13,000 oo dollar in ay bixiso.
Seddax gabdhood oo kale ayaa lagu kala xukumay min $13,000 oo dollar oo ganaax ah in ay mid kasta bixiso, waxaana lagu helay dembi ah “ka ganacsiga dadka”.
Waaxda dacwad oogidda Masar ayaa haweenkaas ku eedeeysay dembiyo ay ka mid yihiin “ku xadgudubka anshaxa qoysaska iyo bulshada Masar, iyo in ay ka qeybgaleen baahinta soo banbixinta iyo dhiiragelinta gabdhaha kale iyo ka ganacsiga dadka”.
Sidoo kale, eedaha haweenkan loo soo jeediyay waxaa ka mid ah: “In lacag ay u soo direen maamulka TikTok, taas oo looga bedelanayay in ay baahiyaan muuqaallo anshax xumo ah, si ay u kordhiyaan dadka ku xiran iyo daawadayaashooda.”
“Iyo in ay ‘Group-yo’ ay ka sameysteen WhatsApp ay gabdhaha oga soo qaadanayeen muuqaallo iyagoo ku dhiiragelinayay in ay isa soo duubaan oo isa soo bandhigaan”.
Haweenkan la xukumay, waxaa kale oo lagu helay in “gabdhaha yaryar ay ku dhiiragelinayeen in ay iska soo duubaan muuqaallo anshax xumo ah, iyo in ay isku deyeen in ay ka dhuuntaan cadaaladda, ayeyna telefoonnadooda iyo barahooda bulshada ku xireen barnaamijyo sir ah”.
Booliska waxay xireen Xaniin, bishii April, ee sannadkii la soo dhaafay – waxayna ahayd qof ay warbaahinta Masar ku naaneyseen “gabadha TikTok”.
Waaxda dacwad oogidda Qaahira, ayaa Xaniin ka soo qabtay Jaamacadda Qaahira oo ay dhiganeysay.
Waxay xilligaas daba socdeen muuqaal ay soo dhigtay barteeda TikTok oo gabdhaha ay ku weydiisaneysay in muuqaal ay iska soo duubaan iyagoo guryahooda jooga, ka dibna lacag looga bedelan doono.
Ka dib Jaamacadda Qaahira waxay gabadhan ardeyda ahayd u gudbiyeen waaxda sharciga, si loo weydiiyo su’aalo ku saabsan “dhaqanka ku cusub bulshada ee ka dhanka ah anshaxa iyo qiyamka jaamacadda,” sida lagu xusay qoraal ka soo baxay Jaamacaddaas, sannadkii la soo dhaafay.
Madaxweynaha Jaamacadda, Muxammad Cusmaan Al-Khasht, wuxuu sheegay in ciqaabka gabahdhaas go’aan laga gaari doono illaa xilliga ugu dambeeya ee casharadeeda.
Muuqaalka ay gabadha ka soo muuqatay waxay gabdhaha ku weydiisaneysay in ay ku soo biiraan shirkad ay aasaasatay.
Waxay shuruudaha ku sheegtay in gabadh kasta aysan ka yarayn 18-sano, in ay jir-qurxoon tahay oo hub-qaad tahay, iyo in ay muuqaallo iska soo duubaan oo la baahin doono, ka dibna lacag la siin doono.
Qiimaha lacagta wuxuu u kala dhexeeyay $36 illaa £3000 oo dollar.
Xaniin ma aysan sharixin nooca shaqada gabdhaha ay qeybta ka noqonayaan, balse waxay muuqaalkeeda ku sheegtay “in aysan dooneynin gabdho qaawan, iyo in aysan aqbaleynin in hay’addeeda lagu xadgudbo, iyo in ay ku shaqeyneyso si sumcad wanaagsan ah”.
Wareysi ay siiyay telefishin ayay ku sheegtay in ay “dalbatay 20 gabdhood oo bog cusub ku soo biira, oo iska soo duubo muuqaal 3-daqiiqo ah,” balse warbaahinta ay ‘been ka sheegeen’ oo seddax 10-ilbiriqsi ka dhigeen.
Waxay ku adkeysatay in waalidiinteeda ay ansixin jireen muuqaalladii ay gelin jirtay barteeda TikTok.
Gabar caan ka ah Tiktok
toban sano xabsi